Notolorana ny mariboninahitra ny commandeur de l’ordre Nationale ny pastora Mailhol. - Madagascar Informations
Notolorana ny mariboninahitra ny commandeur de l’ordre Nationale ny pastora Mailhol.
21 décembre 2016 21 décembre 2016 Madagascar Informations Aucun commentaire
Feno 20 taona katroka ny fiangonana Apokalypsy ka antony nanolorana ny mariboninahitra commandeur de l’ordre Nationale ny pastora Mailhol androany.
Tsy ny tenany irery anefa no nahazo izao mariboninahitra izao fa ny fiangonana iray manontolo. Raha hiverenena ny tantara dia tsy nisy olona afa tsy olona 2 monja no nampianarina ny bokiny Apokalypsy tany amboalohany rehefa nahazo ny antson’Andriamanitra I pastora.
Tsy maintsy hampahafantarina maneran-tany ny bokiny Apokalypsy fa tsy natao ho an’ny firenena Malagasy irery ihany. Raha ny fitantarany pastora Mailhol hatrany anefa dia nihaotra izy tany ampiandohana saingy nahazo famantarana manokana dia izao toriana manerantany izao ny bokiny Apokalypsy.
Efa saika rakotra ny fiangonana Apokalypsy manerana an’I Madagasikara ary tsy misy izay tsy mahalala azy ny any ivelany. Miisa hatrany aminy arivo amin’izao fotoana izao ny fiangonana 1 tapitrisa kosa ny mpivavaka ary efa mahenika an’I Madagasikara ny onjampeo.
Raha ny mikasika ny zava –bita kosa dia maro ireo niova fo , ireo sitrana taminy aretina ,ireo afaka taminy toaka sy ny sigara.
Ankoatra ireo dia eo ihany koa ny ezaka hataony fiangonana mikasika ny fananganana sekoly eto Antananarivo sy any amin’ny faritany ary farany ny famitana ny fiangonana Apokalypsy farany izay goavana indrindra aty amin’ny faritry Afrika izay hatao etsy Itaosy ka efa eo ampamitana ny fototrin’ny fiangonana amin’izao fotoana izao.
← Le Rotary Club Antananarivo « Doyen » au chevet des membres du CESRN Faniry Ambohibao.
Manohana akaiky ny tanora ny ONG Madasun sy ny Cnaps →
24 avril 2017 Gasikara 0
Latsaky ny 10% amin’ireo no mahalala ny adiny eo amin’ny fitsarana
31 juillet 2018 Madagascar Informations 0